Izindaba - Izici ezisebenzayo zebhodlela lezemidlalo
Izici ezisebenzayo zebhodlela lezemidlalo
Amabhodlela amanzi ezemidlalo aseyimikhiqizo yezemidlalo emisha ethandwa kakhulu futhi enakekela imvelo. Ngokwanda, ukukhula kanye nokukhula okuqhubekayo kwemidlalo yangaphandle yasekhaya, ukuthengiswa kwamabhodlela amanzi ezemidlalo eChina kukhula unyaka nonyaka.
Akukho ukuvuza Akukho okushiwoyo
Ungacabangi ukuthi lokhu kuyihlaya. Eqinisweni, igama liqukethe izincazelo ezimbili: ngakolunye uhlangothi, liqinile kanti ngakolunye uhlangothi ukuphepha. Isimo sasendle sinzima, futhi kunzima ukuzigwema izigaxa. Uma iketela lingenamandla anele, imiphumela ingacatshangwa. Ngokunjalo, uma ukuvulwa kwalo kungavaliwe ngci, ngeke nje kulahlekelwe amanzi okuphuza abalulekile endle, kepha futhi kungamanzisa izingubo, imishini nokunye okuphethe. Uma izinto ezibalulekile njengokudla nezingubo zibulawa, ungabulawa kwezinye izindawo ezimbi kakhulu.
2.Kulula ukuphatha ukuthwala.
Kunezimo eziningi lapho amabhodlela amanzi esetshenziswa ngaphandle, kwesinye isikhathi emabhayisikili futhi kwesinye isikhathi ezindongeni zamatshe. Lokhu kubeka phambili izidingo zokuphatheka kwamabhodlela amanzi. Ezinye iziqukathi ezenziwe ngezinto ezithambile, njengezikhwama zamanzi namaketela esikhumba, zinenzuzo yokungabuyiselwa endaweni yazo. Ivolumu nokuma kwawo kungashintshwa lapho kudingeka. Lokhu ngokungangabazeki yivangeli lesikhwama sakho esigcwele ngokweqile.
3. Yakhelwe ukusetshenziswa okukhethekile Yakhelwe ukusetshenziswa okukhethekile
Isimo sangaphandle sihluka kakhulu, futhi kunezinhlobo eziningi zemidlalo yangaphandle. Kwezinye izimo, imisebenzi ejwayelekile ayikwazi ukuhlangabezana nezidingo. Kulezo zimo lapho kunesandla esisodwa kuphela esingasetshenziselwa ukuphuza, umlomo webhodlela ongavulwa futhi uvalwe ngesandla esisodwa noma ngamazinyo ubaluleke kakhulu. Lapho kunesibalo esikhulu sabantu kanye nesidingo sokukhempa kanye nepikinikini, ibhodlela eligoqekayo Ibhakede lizohlangabezana ngempumelelo nezidingo zekamu lamanzi. Ezimweni ezinzima ezifana nokuphakama okuphezulu noma izindawo ezibandayo, iketela elifakwe insimbi eliqinisekisa ukuthi amanzi akho awaji ngeke likukhathaze.